Global Voices teny Malagasy » Nanasonia Fifanarahana Maha-be Adihevitra Handroahana Mpitsoaponenana Mankany Torkia Ny Vondrona Eoropeana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Avrily 2016 5:10 GMT 1	 · Mpanoratra Lourdes Sada Nandika (en) i Danica Jorden, Naomy
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Eoropa Andrefana, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifindràmonina, Lalàna, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Politika, Vaovao Mafana, Voina, Vonjy Voina, Zon'olombelona
Ho sarotra kokoa amin'ny mpitsoaponenana ny hangataka fialokalofana any Eoropa. Saripika navoakan'i Diario Octubre tamin'ny lisansa CC-BY-4.0.
Na teo aza ny fihetsiketseham-bahoaka  tany amin'ny tanàndehibe eoropeana maro, dia nanasonia fifanarahana tamin'i Torkia ny manampahefanan'ny Vondrona Eoropeana tamin'ny 18 Marsa lasa teo iatrehana ny fitomboan'isan'ny mpitsoaponenana miezaka ny hangataka fialokalokalofana ara-politika ao amin'ny firenena mpikambana. Maro amin'ireo mpitsoaponenana ireo no tafahitsoka ao amin'ny tany Grika ao anatin'ny toerana tena tsizarizary tanteraka.
Araka ny fifanarahana, hanomboka hamerina ireo mitady fialokalofana avy amin'ny zom-pirenena rehetra ankoatra ny Syriana any Torkia ny Vondrona Eoropeana manomboka ny 20 Marsa, ary haka Syriana mpialokaloka iray isaky ny misy mpialokaloka [hafa firenena] iray hafa voaroaka, ao amin'ilay lasa tetika 1:1. Ho takalon'izay dia hahazo vola 6,8 miliara euros (tokony ho 7,6 miliara dolora amerikana) ho fanampiana i Torkia ary ho afa-miditra mitsangatsangana tsy mila “visa” ao amin'ny Faritr'i Schengen  — toerana iray ahitana firenena eoropeana miisa 26 izay tsy manana fanaraha-mason-tsisintany eo amin'izy ireo — ny olona mizaka zom-pirenena Tiorka. Manafaingana ny paika fidiran'i Torkia ho ao amin'ny Vondrona Eoropeana, ao anatin'ny fotoana itsikerana tsy misy toy izany ny governemantan'i Erdogan amin'ny fanitsakitsahana ny fahalalahan'ny fanaovan-gazety  ataony sy ny fomba fitandremany ny zon'olombelona indrindra ihany koa izany fifanarahana izany.
Somary nampihena ny feo avy amin'ny drafi-pifanarahana 8 marsa  [mg] ihany anefa ny manampahefana. Araka ny nolazain'ny sampam-pampahalalam-baovao espaniola Europa Press , “niantoka ny lahatsoratra fa ‘hodinihina tsirairay’ ireo mangataka fialokalofana noraisina tao amin'ny tanin'ny grika ary nanambara ‘mazava’ fa tsy hisy ny ‘fandroahana faobe’, na famindra-toerana indray miaraka ao an-toerana.”
Nanambara  ny Mpitantsoratra Ambony (Chancelier) Alemana Angela Merkel fa izay fifanarahana izao dia”mampiseho fa afa-mandray fanapahan-kevitra sarotra ny Vondrona Eoropeana ary afa-miatrika krizy sarotra.” Etsy ankilany, nolazain'ny Amnesty International ity fifanarahana ity ho “fanapoahana manan-tantara ny zon'olombelona,” tamin'ny fanambarana fa “tsy miara-dalana amin'ny famerenana mankany Torkia ireo mpifindramonina rehetra ny fiantohana hanaraka tsara amin'ny antsipirihany ireo lalàna iraisampirenena.”
Tsy heverin'ny ankamaroan'ny firenena mikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana ho “firenena hafa azo antoka ” i Torkia, ka mahatonga ny fifanarahana ho tsy mifanaraka amin'ny lalànan'i Eoropa mihitsy. Araka ny fampahalalam-baovao mahaleotena espaniola eldiario.es , “nandany andro maromaro ny andrim-panjakana hanome miendrikendrika ara-dalàna ity fifanarahana ity tsy nijerena akory ny fahamendrehan'ilay dina.” Maro ireo fikambanana mpandala ny mahaolona no nitsikera mahery ny fifanarahana, tahaka ity fifanarahana avy amin'ny Oxfam Intermon ity:
Mahazaka tsara ny fandraisana mpitady fialokalofana an'arivony ny Vondrona Eoropeana, ankoatra ny adidiny ara-maoraly ho mpiantoka ny zon'olombelona. Saingy naleony nametraka ny andraikiny amin'i Torkia izay efa mandray mpitsoa-ponenana 2,5 tapitrisa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/04/12/80517/
 Faritr'i Schengen: https://en.wikipedia.org/wiki/Schengen_Area
 fanitsakitsahana ny fahalalahan'ny fanaovan-gazety: https://reclaimourrepublic.wordpress.com/2016/03/19/erdogan-intensifies-assault-on-independent-media-erdogan-gambles-and-loses/
 drafi-pifanarahana 8 marsa: https://mg.globalvoices.org/2016/03/17/80420/
 firenena hafa azo antoka: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l33140
 fikambanana mpandala ny mahaolona no nitsikera mahery : http://www.independent.co.uk/news/world/europe/eu-turkey-refugee-deal-what-is-it-erdogan-a6939156.html
 Oxfam Intermon : http://www.oxfamintermon.org/